काठमाडौँ, २२ फागुन। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रले विसं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको ¬‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन आयोगले आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म कार्यान्वयन हुने उक्त योजनाको मस्यौदा आज आयोगले सरोकारवाला पक्षसँग प्रस्तुत गरी परामर्श लिएको छ ।
कस्तो अचम्म ! यी व्यक्तिले आफ्नै शरीरमा तार जोडेर मटर र आरा मिल चलाउँछन् !! (भिडियो सहित)